တရုတ်နိုင်ငံ ယူနန်ပြည်နယ်မှ ဆင်ပေါက်လေးနှစ်ကောင်၏ ချစ်စဖွယ် နပန်းဗိုလ်လုပွဲ - Xinhua News Agency
ယူနန်၊ ဇွန် ၁၈ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ ယူနန်ပြည်နယ်တွင် ဆင်ပေါက်ကလေး နှစ်ကောင် ရန်ဖြစ်ဆော့ကစားနေကြသည့်မြင်ကွင်းအား ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ယင်းဆင်ပေါက်လေးနှစ်ကောင်မှာ မကြာသေးမီက နာမည်ကြီး လူသိများလာသည့် ဆင်အုပ်ကြီးမှဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ဆင်အုပ်သည် ၎င်းတို့နေထိုင်ရာသစ်တောမှ ကူမင်းမြို့သို့ ကီလိုမီတာ ၅၀၀ ခရီးနှင်လာခဲ့ကြပြီး ယခုအခါ ယူနန်ပြည်နယ် ယွိရှီးတွင် လှည့်လည်သွားလာနေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
GLOBALink | Baby elephants engage in adorable play fight in Yunnan, China
Two baby elephants were spotted engaging inaplay fight in Yunnan,China. The elephants are amongaherd who became widely known recently. The elephants had trekked 500 km from their forest home to Kunming. The elephants are now lingering In Yuxi in Yunnan Province.